ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆာပြေအစားအစာ ၁၀ မျိုး - DVB
ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆာပြေအစားအစာ ၁၀ မျိုး
ဆီးချိုရောဂါဆိုတာက ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါအခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းချုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းကိုမသိဘူးဆိုရင် အရမ်းကို အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးတာလိုမျိုး အာရုံကြောထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုးတွေကနေ နှလုံးဆိုင်ရာရောဂါမျိုးတွေအထိအမျိုးမျိုးသောရောဂါ တွေကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
အင်ဆူလင်လုံးဝကိုမထွက်ရှိတာ (သို့) အင်ဆူလင်က ကောင်းကောင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ဆီးချိုရောဂါခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေရဲ့သွေးကြောတွေထဲက အဆမတန်များနေတဲ့ သကြားဓာတ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါက အချိုဓာတ်စားသုံးမှုအပေါ်မှာ တော်တော်ကိုသက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါက အဆာပြေမုန့်တွေစားသုံးမှုအပေါ်မှာ တော်တော့်ကို ကန့်သတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အဆာပြေမုန့် တော်တော်များများမှာ အချိုဓာတ်ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေနဲ့သင့်တော်မယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အဆာပြေစားစရာအချို့ကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြေပဲထောပတ်က ချိုတဲ့အရသာရှိပေမယ့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုနှုန်းတော်တော်လေးနည်းပါတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေတာမျိုးဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မီးကင်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ညိုပေါ်မှာ မြေပဲထောပတ်ကိုသုတ်ပြီးစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ အင်အားဖြစ်စေနိုင်သလို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်အမျှင်ဓာတ်ကိုလည်းရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ညိုပေါ်မှာ ခပ်ပါးပါးလေးသုတ်ပြီးစားပေးပါ။
အိမ်မှာလုပ်တဲ့ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်က ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေအတွက်စားသုံးဖို့သင့်တော်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးကနေလုပ်တဲ့ ပေါက်ပေါက်ကိုစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်နဲ့ဆားဖြည့်စွက်ထားတဲ့ ပေါက်ပေါက်ကတော့ ဆီးချိုသမားတွေနဲ့မသင့်တော်ပါဘူး။ ပြောင်းဖူးကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်ပြီး canola ဆီလေးနည်းနည်းဆမ်းပြီး စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းစားနိုင်မယ့် အမျှင်ဓာတ်တွေရရှိစေနိုင်မယ့် နောက်ထပ်အဆာပြေစားစရာတစ်မျိုးပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့သင့်တော်တဲ့ ကွေကာအုပ်ကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေပြီး အရသာရှိလှတဲ့ အဆာပြေစားစရာတစ်မျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလည်း မြင့်တက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သကြားဖြည့်စွက်မထားတဲ့ ကွေကာအုတ်ကိုရွေးချယ် စားသုံးပေးပါ။ ကွေကာအုပ်စားသုံးမှုက သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်မယ့် အမျှင်ဓာတ်တွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆီနည်းတဲ့ နို့တစ်မျိုးမျိုးဆမ်းပြီးစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝ ဒိန်ချဉ်ကလည်း အဆာပြေမုန့်တစ်မျိုးမျိုးစားချင်နေချိန်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေနိုင်မယ့် အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဒိန်ချဉ်စားသုံးမှုကကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကို ရရှိစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သလို အစာချေဖျက်မှုကို အထောက်အကူပြုတဲ့အပြင် အခြားသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းသီးတွေမှာ အချိုဓာတ်ပါဝင်မှုတော်တော်လေးများပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးလည်းတော်တော်ပြုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံထဲမှာ သစ်သီးတစ်မျိုးမျိုးပါဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဆီးချိုရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာလည်း သစ်သီးတစ်မျိုးမျိုးထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပန်းသီးကိုပဲစားသုံးတာက ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်လုံလောက်တယ်လို့မထင်ဘူးဆိုရင် ချိစ်ပြားလေးတွေနဲ့တွဲဖက်စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ ပန်းသီးနဲ့ချိစ်ကို တွဲဖက်စားသုံးတာက အာသာပြေစေပြီး ချိုသလို တော်တော်လေးလည်းအရသာရှိပါတယ်။
ခရက်ခ်ကာတွေက ကယ်လိုရီပါဝင်မှုမရှိတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဒြပ်ပေါင်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအသောက် အရင်းအမြစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ခ်ကာကို ချိစ်ပြားတွေကနေစလို့ အခြားသော စားသောက်ဖွယ်ရာတွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်သလို မြေပဲထောပတ် ခပ်ပါးပါးလေးသုတ်ပြီးတော့လည်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
၇. အခွံမာ အသီးတွေ
အခြားသူတွေက အာလူးကြော်လိုမျိုး တကြွပ်ကြွပ်ဝါးလို့ရတဲ့ သရေစာမုန့်ကိုစားသုံးနေချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့လည်း သရေစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် သရေစာအနေနဲ့စားသုံးနိုင်မယ့် အစားအစာတစ်မျိုးကတော့ တကြွတ်ကြွတ်ဝါးစားလို့ရတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ fatty acid တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ အခွံမာသီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခွံမာသီးတွေက အမျှင်ဓာတ်ကိုလည်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီ၊ မက်မွန်သီး၊ငှက်ပျောသီးတို့လိုမျိုး သစ်သီးတွေကို အတုံးလေးတွေတုံးပြီးအဆီထုတ်တဲ့ ဒိန်ချဉ် (သို့) အဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ဒိန်ချဉ် ၆အောင်စနဲ့ရောပြီး ဖျော်ရည်စက်ထဲထည့်ဖော်ျပေးပါ။ရာသီပေါ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သစ်သီးတွေကိုပဲအသုံးပြုပေးပါ။ ထို့နောက် အခဲခံပေးပါ။ သကြားလုံးဝမထည့်ရပါဘူး။
ပဲက အသားထက်အဆီပါဝင်မှုနည်းပြီး ပရိုတင်းဓာတ်ပိုမိုပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ပဲခွက်တစ်ဝက်စာလောက်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေရဲ့ ၃ပုံ၁ပုံကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ pinto ပဲ (သို့) အဆီမပါဝင်တဲ့ ပဲနက်ကို တစ်ခွက်စာရဲ့ ၃ ပုံ တစ်ပုံလောက် ကြိတ်ပြီးအနှစ်လုပ်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအနှစ်ကို ပြောင်းမှုန့်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ မုန့်ဝိုင်းလေးတွေအပေါ်မှာ သုတ်ပြီးစားသုံးပေးနိုင်သလို တို့ပြီးစားသုံးပေးလို့လည်းရပါတယ်။
၁၀. အဆီမပါတဲ့ Latte
အဆီထုတ်နို့နဲ့ဖော်ျထားတဲ့ latte ၈ အောင်စမှာ ကယ်လိုရီပမာဏ ၁၀၀ နဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၁၅ ဂရမ်သာပါဝင်ပါတယ်။ အရိုးဖွဲ့စည်း မှုအတွက်အရေးပါတဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဗီတာမင် ဒီတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အဆာပြေစားသုံးတဲ့အခါ အာသာပြေတယ်လို့ခံစားရစေဖို့ ဈေးဝယ်ထွက်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတစ်ခုခုနဲ့တွဲစားပေးလို့ရပါတယ်။
Tags: ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေအတွက်၁၀ မျိုး
Previous story ကျိုင်းတုံတွင် မီးရှို့သတ်ခံရတယ်လို့ယူဆရသည့် အမျိုးသမီးအလောင်း တွေ့ရှိ
Next story မင်းသားဟယ်ရီနှင့် မီဂန်မာကယ် စေ့စပ်ဓာတ်ပုံများ ထုတ်ပြန်
02	ခနျြပီယံလိဂျ ပထမအကြော့တှငျ ခြဲလျဆီး ရှုံးပွီး ဘာစီလိုနာ သရကြေ (ရုပျသံဟိုကျလိုကျ)
01	ခနျြပီယံလိဂျ ပထမအကြော့တှငျ ခြဲလျဆီး ရှုံးပွီး ဘာစီလိုနာ သရကြေ (ရုပျသံဟိုကျလိုကျ)
02	ပွညျနယျနှငျ့တိုငျး ၆ ခုတှငျ အခြိနျအခါမဟုတျ မိုးရှာနိုငျ
03	အစ်စရေးနှငျ့ ပါလကျစတိုငျး အပွနျအလှနျ လကွေောငျးတိုကျခိုကျ
04	ကနျကွီးထောငျ့မွို့နယျ၌ မူလတနျးကြောငျးပွိုကသြဖွငျ့ ကြောငျးသားမြား ရှပွေ့ောငျးစာသငျနရေ
05	မွနျမာ့တပျမတျောက တရုတျပွညျသူမြားအတှကျ ဒျေါလာ ၃ သိနျးဖိုး ဆေးစ်စညျးမြားပေးပို့လှူဒါနျး